Las Vegas, Macau, Monaco njem nleta ma e jiri ya tụnyere Hawaii na Seychelles?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ mgbasa ozi Macau » Las Vegas, Macau, Monaco njem nleta ma e jiri ya tụnyere Hawaii na Seychelles?
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Akụkọ okomoko • Akụkọ mgbasa ozi Macau • Akwụkwọ akụkọ Monaco • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mkparịta ụka a na-eme n'oge nsogbu, anyaukwu ma ọ bụ mgbe ị na-achọ ụzọ. Na Hawaii ịgba chaa chaa amachibidoro na maka dcades ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ụmụ amaala achọghị inwe ịgba chaa chaa ọ bụla na Aloha Steeti, ọ tụgharịrị Las Vegas ka ọ bụrụ ebe ezumike kachasị amasị ndị Hawaii.
Gba chaa chaa nwere ike ịdị mma, ọ bụkwa ihe na-agbanwe egwuregwu maka ebe ọ bụla na-enye ya ohere. Seychelles dị ka mba nweere onwe ya, n'ezie, nwere uru na ịhazi ụlọ ọrụ dị otú ahụ ma hụ na akụkụ dị mma nke uru na-anọ na mba ahụ. O doro anya na ndị na-eme mkpọtụ si na nnukwu ịgba chaa chaa ga-enwe mmasị ịhụ ịgba chaa chaa na-enye n'agwaetiti mara mma na Indian Ocean.
Onye bụbu minista na-ahụ maka njem na Seychelles Alain St.Ange, onye bụzi onye na-ahụ maka njem nleta na-ahụ ohere maka obodo ya wee dee na akụkọ ya kwa izu:
“Ugbu a, Seychelles na-efu ego buru ibu nke enwere ike inweta site na casinos zuru ụwa ọnụ. Casinoslọ casinos ndị a nwere ike ibubata ọtụtụ ndị ịgba chaa chaa bara ụba n'ụsọ mmiri anyị site na ịnye ụgbọ elu, njem, ebe obibi na ebe ntụrụndụ ụwa, na ntụrụndụ dị ka njem ụgbọ mmiri na nleta agwaetiti. Ọzọkwa, ndị ama ama dị elu a ga-emefu nnukwu ego na ịzụ ahịa na iri nri n'oge ha nọrọ, na-agbakwunye elele akụ na ụba. Ọzọkwa, dị ka okwu a na-ekwu 'nsogbu ndị ahụ na-amasịkarị cha cha'. Ọ bụghị ịkụda ịgba chaa chaa, mana ọnụ ọgụgụ na-egosi na enwere ohere ka ukwuu nke ego ịnọ n'ụlọ, karịa ịhapụ ụlọ. Site na 'ulo' bu Seychelles na nke a, abawanye uru elele aku na uba.
“Mba ndị dịka Macau na Monaco bụ ndị amaara ama maka ụlọ ịgba chaa chaa ndị mara mma, ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị akụ na ụba site na ịlụ ndị ịgba chaa chaa dị elu, ndị a makwaara dị ka ndị egwuregwu junket. Ndị egwuregwu Junket sitere na US ọtụtụ afọ gara aga na atụmatụ iji wuo obodo a ma ama ugbu a bụ Las Vegas. Ndị na-arụ ọrụ cha cha na Las Vegas ga-ewe ndị ọrụ 'junketeers' iji mejupụta ụgbọ elu ndị nwere ịgba chaa chaa ruru eru. A ga-emeso ndị egwuregwu a ihe ikuku ụgbọelu na-akwụghị ụgwọ, ụlọ nkwari akụ, nri na ihe ngosi n'efu ka ha wee nwee ike ịgba chaa chaa maka ọtụtụ awa kwa ụbọchị na nha nzọ. Ndị casinos ahụ chere na ndị egwuregwu ahụ ga-efunahụ karịa ihe etinyere iji weta ha na tebụl, na ọtụtụ oge ha ziri ezi. N'oge na-adịghị anya, echiche egwuregwu ọkpụkpọ egwuregwu aghọwo ọrụ zuru ụwa ọnụ.
“Ndị egwuregwu a egosila na ọ ga-amasị ha ibute ha na Seychelles ka ha gbaa chaa chaa ma n’otu oge ahụ nwee ọ exụ ụdị obi ụtọ na-ekpo ọkụ nke mba anyị, njikọta ha na-agaghị enwe ike ịchọta n’ebe ọzọ. O di nwute na iwu ugbu a na-egbochi casinos nke obodo ka ha kpọ ha. ”
Enwere nchegbu doro anya banyere enwere ike iji ego mebie ego na ndị na-egwu egwuregwu na enweghị njikwa ma ọ bụrụ na azụmahịa ego na-eme na mpụga Seychelles. N'ebe a, ọ dị ezigbo mkpa iburu n'uche na ọ bụrụ na akpọtara ndị egwuregwu a na Seychelles na ndị ọchịchị ga-achọ ịhazi azụmahịa azụmahịa nke onye ọkpụkpọ niile maka obere akpa, yana na azụmahịa ndị a na-ewere ọnọdụ naanị na cha cha cha cha na Seychelles. Ekwesiri itinye iwu banyere junkets na njikwa ha tupu oge eruo.
Industrylọ ọrụ njem nleta nke Seychelles na-efu nnukwu ohere ugbu a n'iweta ndị egwuregwu a dị elu na mba anyị. Anyị enweworị ebe ndị magburu onwe akụrụngwa na ụlọ nkwari akụ na ebe ntụrụndụ ebe ọ bụla n'ime ndị egwuregwu a ga-ahụ n'ụlọ.